Bayaan kasoo Baxay Guddiga Qurba Joogta Beesha Biimaal(DIR) (Bimal Diaspora Committee” BDC”) | Salaan Media
Bayaan kasoo Baxay Guddiga Qurba Joogta Beesha Biimaal(DIR) (Bimal Diaspora Committee” BDC”)
Wada tashi iyo xariirro fara badan gudaha iyo dibedda uu guddiga la yeeshey,dhallinyerada, Aqoonyahanada, Siyaasiyiinta, Culumaa uddiinka, haweenka, kuna saabsan wada heshiskii la sheegey inuu dhex marey laba beelood oo walaala ah ee Waa dega gobolka Shabeelada hoose.
Waxuu guuddiga go’aan ku gaarey inuu caddeeyo arrimaha hoosta ku qoran:-
Beel weynta Biimaal meel kasta ee ay ka joogto dunida, iyo inta gobol ay ka deggantahay dalka gudahiisa iyo dalalka dereska ah inaysan aqbaleynin sina ku qaadaneynin qodobada laga akhriyey idaacadda SNTV.
Asbaabta soo socoto aawgeed
1-Ayada oo aysan dagaallamin laba beelood oo wada deggan.
2- Ayada oo heshiiska la sheegey uusan marna ka talin inay nabad gelyo ka dhacdo deegaanka beesha, uuna yahay mid keliya beesha weerarka soo qaadey ee ka timidgobollada dhaxe loogu banneynaayo dhulka beesha Biimaal.
3- In qodobada keliya lagu caddeeyey in ciidanka beesha Biimaal keliya la xareynaayo, gobolkana laga dhigaayo mid keliya ay beesha soo duushey ciidankeeda faraha loo gelinaayo.
4- Hubka keliya laga aruurinaayo ciidanka xaq u dirirka ah ee beesha, halka Ciidanka Mooryaantana loo deynaayo hubkooda.
5- Ayada oo si caddaan ah ay dowladdu u caddeysey, haddii Biimaal uu dulmiga qaadanwaayo ciidamada dowladda ay ku soo duuli doonto, ayana garab istaagidoonto beesha dhul boobka ku heyso gobolka.
6- Ayada oo heshiiska lagu caddeeyey in sbaarada la qaadaayo keli ay tahay tan beesha Biimaal ee nabad gelyada goboklkeeda ku ilaaliso.
7- qodobada heshiiska oo ah mid ay wejiga ku suubsadeen Wasiirada iyo xildhibaanada diyaariyey, si aan loo oran, wasiirka aminiga iyo kan cadaaladda ayaa laba beelood arrin dhex martey xallin waayey.
8- Wasiiradaas oo doonaaya in ay ka bad baadaan shaandheenta Madaxweynaha hor taal, taasi oo ay garab ka doonayaan beeshaan dowladda afduunbtey.
9-Heshiiskaani oo si caddaan u qeexaaya in dadweynaha u dhashey gobolka shabeellada hoose , aysan maamul dhisan karin loona soo dhisaayo, oo dowladda ay usoo dhiseyso, taasi oo khilaafsan dastuurka dowladda federaalka, kuna ah meel ka dhac loo geysanaayo beelaha dega gobolka sh.hoose.
10- heshiiskaani oo aan ka dhicin goob cadaalad iyo goob ay nabad gelyo ka jirto, laguna afduubey odeyda beesha Biimaal, oo habeyn walbo handadaad caddaan ah ay ku haayeen hooggamiyo kooxeedka beesha Hawiye , iyo rag daneystayaal ah oo beesha Biimaal u dhashey.
Guddiga BDC waxuu beelaha Soomaaliyeed guud ahaan, beelaha Direed iyo beelaha u dhashey Gobolka shabellada Hoose u caddeynayaa, qoraalka laga akhriyey SNTV uu gaar u yahay intii saxiixday iyo intii soo diyaarisay, Beesha Biimaal-se waxay ka xigaan in lagu gumaado gobolka intii ay qaadan lahayd go’aan ay dhowr qof oo daneystayaal ah aysoo abaabuleen.
BDC waxuu u caddeynayaa Umadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan hoogaanka dowladda federaalka Soomaaliyeed , inaanu ka sugeyno cadaaladii ay ballan qaadeen, haddiise la waayana, dalka inuu dib burbur toos ah uu oogu noqondoono.
Waxaanan illoweynin inaannu caddeyno, beesha Habargidir inay qorba joogga ay wada saartey dhaqaale gaar ah qof walbo sidii loogu gumaadi lahaa besha Biimaal sida uu shegey suldaankooda, iyo ugaasyadooda.
Waxaan baaq u direynaa Beesha Direed, waxaa nasiib darro aan u aragnaa, odeyda shiraasi ka qeyb galey inay beesha Biimaal usoo qaadeen, wax aan u qalmin, oo uusan Biimaal raali ka aheyn iyaga haddii ay taasi haaysato aysan usoo qaadi lahayn.
Ugu dambeentii Heshiiska la sheegey wuu dhax marey Beesha Biimaal iyo Beesha Habargidir waa heshiis uusan waxba ka jirin, Habargidir haddii ay gobolkka xaq u ledahayna waxaa ka jawaabidoono dadka gobolka u dhashey ee 22ka sano ay dhibaato ku heysay.
Heshiiskaa waa hal bacaad lagu lisey, ninkii bacaadka ka cabbi karana ha ka cabbo , Biimaalse kama cabbidoonee.
Beesha meel kastoo ay joogto waxaan fareynaa inay u woda istaagaan, mudaaharaadna ka dhigaan heshiiskaan dhulmiga ku saleysan.
Gudaha gaar ahaan.. waa inay arrintaani u arkaan sida ay tahay, oo ay hor joogsadaan dulmiga kusoo socdo gobolka guud ahaan, iyo degmooyinka beesha gaar ahaan.
Wa BIllaahi attowfiiq.
Guddiga “Bimal Diaspora Committee”.